Nagu saabsan - LifeBogger (Sheekooyinka Carruurnimada Kubadda Cagta iyo Xaqiiqda Taariikh nololeedka)
Ku soo DHAWOOW LifeBogger! Hoyga sheekooyinka Kubadda Cagta Saxda ah.
Ciyaartoyda xirfadlayaasha ah, maamulayaasha kubada cagta iyo aqoonyahanada dhamaantood waxay heleen sheekooyinka Carruurnimada iyo Xaqiiqda Taariikh nololeedka. LifeBogger waxay qabataa waqtiyadan aan la ilaawi karin oo labadaba xiiso iyo taabasho ah.
Qalabkayagu wuxuu soo bandhigayaa sheekooyinka carruurnimada ugu layaabka badan, ee la yaab leh oo xiisaha leh iyo Taariikh nololeedka Xaqiiqooyinka ciyaartoyga kubada cagta (firfircoon / howlgab ah), maareeyayaasha kubada cagta iyo indheer garadka. Waxaan ka hadlaynaa dhacdooyinka caanka ah waqtigoodii carruurnimada ilaa markii ay caan noqdeen.
Waa wax lala yaabo in la arko sida kubbada cagta, maamulayaasha iyo indheer garadka ay uga soo baxaan carruurta quruxda badan ilaa xirfadlayaasha. Ujeedadayadu waa in aan diirada saarno dhacdooyinka ku dhacay nolosha shaqsiyaadkaas, midda ku soo kordhisay miyirkooda ka dib.
Our Mission: Inaad ka mid noqotid Ilaha Dijital ah ee Ugu Fiican ee Ciyaaraha Kubadda Cagta Kubbadda Cagta iyo Xaqiiqda Taariikhda Nolosha.
LifeBogger wuxuu ku dadaalayaa inuu ka mid noqdo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ciyaaro ciyaaraha tooska ah ee sheekooyinka carruurnimada iyo Untold Biography Xaqiiqooyinka ciyaartooyda (labadaba firfircoon iyo kuwa howlgab ah), maamuleyaasha iyo aqoonyahanada kubada cagta.
Marka aan sidaa yeelno, waxaan hubineynaa inaan siino akhristayaasheena sharafta leh siyaasadaha guud ee tusmada (qiimaha qaddarka leh) ee ka dhigaya inay dib ugu soo noqdaan wax badan.
Maqaalladayagu waxay ka kooban yihiin falanqayn buuxda oo ku saabsan ciyaartoydooda / maareeyayaashooda / noloshooda hore, taariikhda qoyskooda, noloshooda shaqo ee hore, waddada / u soo kicinta xaqiiqooyinka taariikh nololeedka, nolosha qoyska, nolosha xiriirka, nolosha shaqsiga, qaab nololeedka iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin.
Himiladeenna: Si loo abuuro loona xafido keyd dijital ah loogu talagalay taageerayaasha kubada cagta.
Waxaa lagu qiyaasaa in in kabadan nus ka mid ah dadka dunida ku nool ay naftooda u arkaa inay yihiin kuwa kubbadda cagta (kubada cagta) raacsan ama taageerayaal ah. Tani waxay muujineysaa in 4 bilyan oo qof oo adduunka ah ay daawadaan kubada cagta oo ah isboorti ugu caansan adduunka.
In kasta oo aynaan sameynin wararka jebinta kubbadda cagta ama aan siinno dhibcaha ugu dambeeya ama 10-ka sare, hadafkeennu waa inaan ilaalino sheekada carruurnimada kubbadda cagta ee dijitaalka ah iyo kaydinta taariikh nololeedkiisa ee taageera kasta.
Caruurnimadeena kubada cagta iyo keydkeena taariikh nololeedkeena waxay rajeyneysaa inay siiso taageerayaasha kubada cagta macluumaad dheeri ah oo ku saabsan ciyaartoyda ay ku farxaan maalmo kasta oo ciyaarta TV-ga ah. Sidaa awgeed, maahan kaliya daawashada kubada cagta laakiin akhrinta.
Qiimaheena: Waxyaabaha Tayada leh iyo Kalsoonida.
Nuxurka Tayada: LifeBogger waxay ku dadaaleysaa inay bixiso waxyaabo heer sare ah oo gaarsiiya qiimaha qaaliga ah kuwa jecel kubada cagta adduunka.
Dareen: Waxaan aaminsanahay in Kubadda Cagta (Kubadda Cagta) ay la xiriirto kalgacal, shucuur, xiise iyo u heellan. Sidaa daraadeed, waxaan u soo qaadanaa xiisaha qorista sheekooyinka carruurnimada kubada cagta iyo Xaqiiqda Untold Biography.
Runtu waxay tahay, qorista waxyaabaha kubbadda cagta ah iyo abuurista xamaasad ayey inagu baabi'isay, taasoo naga dhigeysa inaan aaminsanahay inay tahay Call Clarion.
Taariikhda la beddelay: Noofambar 22, 2020
Taariikhda la beddelay: Noofambar 20, 2020